I-Socialism: Inkcazo eneemizekelo
I-Socialism iyigama lezopolitiko elisetyenziselwa inkqubo yezoqoqosho apho ipropati ibanjelwa ngokufanayo kwaye ingabi ngabanye, kwaye ubudlelwane bulawulwa ngumbuso wezopolitiko. Ubunikazi obuqhelekileyo asithethi ukuba izigqibo zenziwa kunye, nangona kunjalo. Endaweni yoko, abantu abasemagunyeni egunyaziwe benza izigqibo egameni leqela elihlangeneyo. Kungakhathaliseki ukuba umfanekiso wesimboli we-socialism ngabaxhasi bawo, ekugqibeleni ususa iinqununu zesigqibo seqela ngokukhetha ukhetho lomntu omnye obaluleke kakhulu.
I-Socialism ekuqaleni yayibandakanya ukutshintshwa kwepropati yangasese kunye nokuthengiswa kwemarike, kodwa imbali ibonakalise ukuba akukho nto. intlalo yoluntu ayinakukuthintela abantu ukuba bancintisane nento esweleyo. Intlalo-ntlalo, njengokuba siyazi namhlanje, ngokuqhelekileyo ibhekisela "kwimarike yentlalo," equka ukuthengisana kwamanye amashishini okucwangciswe ngokucwangcisa.
Abantu bahlala bedibanisa "intlalo-ntle" kunye nomgaqo "wobukhomanisi." Nangona iimbono ezimbini zibelana ngokufanayo - ngokwenene, ubukhomanisi bubandakanya intlalo-ntlukwano-ntlukwano ebalulekileyo phakathi kwezi zibini kukuba "intlalo-ntsapho" isebenza kwiinkqubo zezoqoqosho, kanti "ubukomnisi" busebenza kwiinkqubo zoqoqosho kunye nezopolitiko.
Omnye umahluko phakathi kwentlalo-ntlalo kunye nobukhomanisi kukuba oomakhomanisi bawachasa ngokucacileyo umgaqo-ntlupheko, inkqubo yezoqoqosho apho imveliso ilawulwa yizinto ezizimeleyo. I-Socialists, ngakolunye uhlangothi, ikholelwa ukuba inzululwazi inokuthi ikhona ngaphakathi kwintlangano yoluntu.
Iingcamango zoNyango zoQoqosho
Ubuncwane-mali - Inkqubo-mali yenkqubo yezoqoqosho ebandakanya ubunikazi bucala kwiindlela zokuvelisa, ukuhanjiswa kweempahla kunye nesakhiwo esipheleleyo samashishini. Isisiseko sokufumana inzuzo, ngokuphumelela, ngumqhubi oyintloko kwintlanga-ntlangano apho izigidi zamashishini kufuneka zikhuphisane omnye nomnye ukuze aphile. "
Ngaba iRhafu yeNtlalontle kwiNtsimi ibuhlungu abahluphekileyo? - "Ngaba izityebi zihlawula iirhafu eziphezulu xa ziba ngumthetho? Ngokwenene, impendulo nguwe ewe. Kodwa inyaniso kukuba loo ndleko idla ngokugqithiselwa kwabanye abantu okanye ukuchitha imali inqandekile. Iimali ezincinci zeshishini kunye namashishini aphakathi nendawo ziwela kwindawo ekujoliswe kuyo yerhafu. idluliselwe kubathengi, kwaye abo abaneengeniso ezingenakuhlawulwa bajonga ukuba iindleko ziphakama ngamanye amaxesha amanqanaba awonakalisayo. "
Ngaba ii-Conservatives zichasene noMvuzo oNcinane? - "Kungekuphela nje ukuphakamisa umvuzo omncinci wokunciphisa inani lemisebenzi ekhoyo, kodwa mhlawumbi luzahluleka ukwenza ubomi" bubebizi "kubasebenzi ngokukhawuleza. Cinga ukuba wonke umthengisi, ishishini elincinane, isiteshini segesi kunye nokutya okukhawulezayo kunye nokudibanisa i-pizza baphoqelelwe ukuba bandise ukuhlawulwa kwabo babeselula kakhulu, abakhulile bekholeji, ixesha lesithuba, kunye nabasebenzi abesibini ngo-25%. Ngaba bahamba nje "bahle" kwaye bangenzi nto yokwenza loo nto? Akunciphisi inani labasebenzi beentloko (mhlawumbi bangenzi iimeko zabo "bhetele") okanye banyuke iindleko zemveliso okanye inkonzo yabo. Ngoko ke xa ukhuthaza umvuzo omncinci wabasebenzi (kwanokuba ucinga ukuba bangabasebenzi abasweleyo) akunakuncedo kuba ixabiso lemveliso nganye eceba ukuyithenga kwabanye abathengisi, izihlanganisi zokutya okukhawuleza, kunye ne-shishini elincinci livele likhawuleze ukuhlawula ukunyuka kwehlawulo. Ekupheleni kosuku, ixabiso ledoli liphela nje buthathaka kwaye ukukwazi ukuthenga iimpahla ezininzi kubangelwa zibiza kakhulu . "
Ukubizwa : i- soeshoolizim
Eyaziwayo Njenge: Bolshevism, Fabianism, Leninism, Maoism, Marxism, ubunikazi obumbeneyo, ubumbano, ubunikazi bombuso
Imizekelo: "Intando yesininzi kunye nentlalo yoluntu ayinanto efanayo kodwa enye igama, ukulingana. Kodwa phawula umehluko: ngelixa intando yesininzi ifuna ukulingana inkululeko, inzululwazi ifuna ukulingana ekunqandeni nasekusebenzeni. "
- Isazi-mlando seFransi kunye nomfundisi wezopolitiko uAlexis de Tocqueville
"Njengaye inkolo yobuKristu, isithuba esibi kunazo zonke kwi-Socialism ngabaxhasi bayo."
- umbhali uGeorge Orwell
UMongameli weSiriya uBashar el Assad: Iprofayili
I-Statue ye-Liberty's Origin in Egypt
2016 I-United States I-Senate Elections
Iimvumi ze-Conservative ukusuka ngo-2014
Indlela yokudibanisa izenzi
Ukuguquka kweMelika: Omkhulu uSamuel Nicholas, USMC
Ukusebenzisa i- 'Que' njengesiQiniso
Iintlobo ezili-10 ezisisiseko zeenkwenkwezi (kunye nendlela yokuziqonda eZulwini)
2002 IBritish Ivulekile: Els Survives 4-Man Playoff
Ukufumanisa iJob kwiZiko lobuGcisa
IiTsunami ezibi kakhulu zehlabathi
Umculo wexesha leNkcubeko